တရုတ်နိုင်ငံ၏ BRI စီမံကိန်းများက ကမ္ဘောဒီးယား စီးပွားရေး နှင့် ပြည်သူများအတွက် အလွန်အကျိုးရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပညာရှင်များ ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Koh Kong ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပထမဆုံးအမြန်လမ်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ နိုင်လွန်ကတ္တရာရောစပ်သည့်စခန်းတစ်ခုအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ မေ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက အဆိုပြုသည့် ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက်(BRI)အောက်ရှိ စီမံကိန်းများသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအား များစွာအားပေးမြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယား တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ BRI စီမံကိန်းကြီးများတွင် သီဟာနုဗီလီ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ၊ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ၊ ဖနွမ်းပင်-သီဟာနုဗီလီ အမြန်လမ်း ၊ Siem Reap အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သစ် ၊ Morodok Techo အမျိုးသားအားကစားကွင်း ၊ လမ်းများ ၊ တံတားများ ၊ ဆေးရုံများ နှင့် ကျေးလက်ရေရရှိရေးတို့ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Kampong Speu ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပထမဆုံးအမြန်လမ်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ ကွန်ကရစ်ရောစပ်သည့်စက်ရုံတစ်ရုံအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“အဲဒီစီမံကိန်းတွေက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီး ပေးခဲ့ပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ပြည်သူ့လုပ်ငန်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ထောက်အတွင်းဝန် နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Vasim Sorya က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Stung Treng ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Lower Sesan II ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ရုံအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ဒီက BRI စီမံကိန်းတွေက နှောင်ကြိုးတွေမပါဘဲ အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားပေးမြင့်တင်ဖို့ နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှု ရှိသော်ငြားလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ BRI စီမံကိန်းများအားလုံးသည် တစ်ဖြည်းဖြည်းပို၍ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကုန်ကျမှုရှိသော Phnom Penh-Sihanoukville အမြန်လမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား ဥပမာပေး၍ Vasim Sorya က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Kandal ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ တရုတ်နိုင်ငံက ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသည့် ဓာတ်အားပို့လွှတ်သည့်စနစ်တစ်ခုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ယင်းအမြန်လမ်းစီမံကိန်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ယခုနှစ်တွင် အလုံးစုံပြီးစီးမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ လမ်းတည်ဆောက်မှုအတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင် ၃,၀၀၀ ကျော် ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“၁၉၀ ကီလိုမီတာရှိတဲ့ အမြန်လမ်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ BRI အောက်က အကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော် ဖနွမ်းပင်မြို့ နဲ့ သီဟာနုဗီလီမြို့က နိုင်ငံတကာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို ချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တွန်းအားအသစ်တစ်ရပ် ထပ်တိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု Vasim Sorya က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပိုးလမ်းမ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမတို့အား ရည်ညွှန်းသည့် ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက်(BRI)သည် ရှေးဟောင်းပိုးလမ်းမကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအား ကျော်လွန်ကာ ဥရောပ နှင့် အာဖရိကအထိ အာရှနှင့် ဆက်သွယ်နေသည့် ကုန်သွယ်ရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်ရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
BRI စီမံကိန်းများအားလုံးကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သည့် ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း Vasim Sorya က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ BRI သည် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ၊ စီးပွားရေး ၊ ကုန်သွယ်ရေး ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလှမ်းများ ၊ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး ၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးတို့တွင် ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ခြုံငုံပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် BRI က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကို ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အလမ်း နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးအပ်ပြီးတော့ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းမှာနဲ့ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာ ဒေသတွင်း နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး မြှင့်တင်ဖို့ ကူညီပေးမှာပါ” ဟု Vasim Sorya က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒီအဆိုပြုချက်က ကျွန်တော်အမြင် လူသားတွေအတွက် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အကူအညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်အတွင်းဝန် နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Penn Sovicheat က သီဟာနုဗီလီ အထူးစီးပွားရေးဇုန်(SSEZ)သည် BRI အောက်တွင် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“သီဟာနုဗီလီ အထူးစီးပွားရေးဇုန်က အလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေအများကြီး ပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းအစုအဝေးအတွက် စံနမူနာထားထိုက်တဲ့ဟာအနေနဲ့ ပို့ကုန်တွေအတွက် အခြေခံတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစီရင်ခံစာအရ သီဟာနုဗီလီ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ပို့ကုန် ၊ သွင်းကုန်ပမာဏမှာ နှစ်အလိုက် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖနွမ်းပင်-သီဟာနုဗီလီ အမြန်လမ်းအနေဖြင့် ယင်းစီမံကိန်းသည် ခရီးသွားလာမှုအချိန် ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအား လျှော့ချရန် ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးချိတ်ဆက်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့အကြား ပို့ကုန်-သွင်းကုန် ကိစ္စများ တိုးပွားလာစေရန် အရေးပါကြောင်း Penn Sovicheat က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ၂၁ ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမသုတေသနစင်တာ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး Neak Chandarith က BRI သည် သီဟာနုဗီလီကမ်းရိုးတန်းမြို့တွင် ဘက်စုံသုံးအထူးစီးပွားရေးဇုန်များ နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တိုးတက်မှုမဟာစီမံကိန်း ၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒ ၂၀၁၅-၂၀၂၅ ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံမဟာဗျူဟာအဆင့် IV ကဲ့သို့သော ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာများအတွက် များစွာအကူအညီပေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခု နှင့် ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဝင်ငွေမြင့်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာရေး ရည်မှန်းချက်ကြီးသောပန်းတိုင်အား စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကားခဲ့သည်။ “BRI စီမံကိန်းတွေက ကပ်ရောဂါအလွန်ခေတ်မှာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကအကြောင်းခံသောအရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်အခြေစိုက် Smile Shop အွန်လိုင်းဈေးကွက်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mak Chamroeun က BRI သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ သဟဇာတဖြစ်ခြင်း ၊ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ကြီးပွား ချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့် ကမ္ဘာအား ဆက်သွယ်ထားသည့် အဆောက်အအုံဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက် BRI စီမံကိန်းများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနက် ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိနေသော တရုတ်နိုင်ငံသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ ၊ စွမ်းအင် ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ပင်မကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသီးသီးရှိကြောင်း ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“အဲဒီအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတွေအားလုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို တိုးတက်စေရုံသာမကပဲနဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေ ခေတ်မီဖို့အတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။”ဟု Mak Chamroeun က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
PHNOM PENH, May 8 (Xinhua) — Projects under the China-proposed Belt and Road Initiative (BRI) have been greatly boosting Cambodia’s economy and improving local people’s livelihoods, Cambodian officials and experts said.
”The 190-km expressway is the largest project under the BRI in Cambodia, and it will addanew impetus to Cambodia’s economic development since it links the capital Phnom Penh with the international deep-water seaport in Sihanoukville,” he said.
”Generally speaking, the BRI has provided tremendous opportunities and benefits to all participating countries around the world, helping to boost regional and global economies during and after the pandemic,” Sorya said. “This initiative, in my view, is importantly contributing to buildingacommunity of shared future for mankind.”
”It will help Cambodia to achieve its ambitious goal of becoming an upper-middle income country by 2030 andahigh income country in 2050,” he told Xinhua. “The BRI projects will be the major contributors to Cambodia’s economic growth in the post-pandemic era.”
“China, ranked top among foreign investors in Cambodia, has various investments in Cambodia’s backboned sectors such as special economic zones, transport infrastructure, energy, agriculture, telecommunication, and tourism among others,” he told Xinhua.
“All these infrastructure projects have been playingakey role not only in improving people’s daily lives, but also in promoting economic growth and modernizing rural areas,” he said. ■
Photo 1 – Aerial photo taken on Dec. 2, 2020 shows an asphalt mixing station at the construction site of the first expressway in Cambodia in Koh Kong Province, Cambodia. (Photo by Li Zhen/Xinhua)
Photo2– Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 showsaconcrete mixing plant at the construction site of the first expressway in Cambodia in Kampong Speu Province, Cambodia. (Photo by Li Zhen/Xinhua)
Photo3– Aerial photo taken on Sept. 20, 2019 showsaview of the Lower Sesan II hydroelectric power station at Sesan District of Stung Treng Province, Cambodia. (Photo by Chen Gang/Xinhua)
Photo4– People walk byaChina-funded power transmission system in southern Kandal province, Cambodia, April 28, 2016. (Xinhua/Sovannara)